On nov 22, 2019 3 910
Notanterahina tetsy amin’ny Centre de Commerce et de l’Industrie (CCIA), Antaninarenina omaly, ny fampahafantarana sy fankatoavana ny famatsiam-bola FAAP (Fond d’appui Après Partage) izay ao anatin’ny tetikasa PAPI (Programme d’Appui a la Promotion des Investissements), tohanan’ny Banky afrikanina aho an’ny Fampandrosoana, na ny BAD.
Marihana fa tetikasa iandraiketan’ny EDBM sy ny Ministeran’ny Indostria, ny varotra ary ny asa tanana ny PAPI. Tanjony ny fanampiana sy ho fanohanana ny orinasa madinika sy salantsalany mba ahafahan’izy ireo mivoatra sy mivelatra ary ho matihanina eo amin’ny tontolon’ny fandraharaha eto Madagasikara.
Mitetina 2 Tapitrisa dolara ny tetibola natokana hanantanterahana ny tetikasa. Nilaza ny tomponandraikitra avy ao amin’ny EDBM fa tsy maintsy mahafeno ny fepetra takian’ny « Comité d’attribution officiel » ny orinasa afaka misitraka ny famatsiam-bola.
Anisan’ny fepatra takiana ohatra ny tsy maintsy maha-orinasa mpanjaitra akanjo, mpikirakira lamba, mpamokatra kiraro, sns. Tsy maintsy efa nitsangana ara-dalàna maherin’ny 2 taona ,ny orinasa ary tsy misehatra amin’ny fanondranana entana.
Marihina fa 70% ny filan’ny orinasa izay nahafeno fepetra no tohanan’ny tetikasa FAAP/PAPI, ny 30% filana ambiny dia avy amin’ny tompon’ny orinasa.